Shijiazhuang Tianqiao Welding Materials Co., Ltd yasekwa ngo-2007 ibekwe ngeekhilomitha ezingama-30 kumzantsi-ntshona shijiazhuang. Ukugcwala kwethu kwefektri kulunge kakhulu kwiikhilomitha ezingama-20 ngasentshona ye-107 kuhola wendlela kazwelonke, ikufuphi nakwindlela u-Shixing noJingzan. Sinamandla obuchwephesha, izixhobo zokuvavanya imveliso ukuze sikwazi ukugcina umgangatho wemveliso ozinzileyo. Inkampani yethu yenziwe lisebe lemveliso, isebe lobugcisa, isebe le-R & D, i-QC kunye neLebhu, iSebe lokuThengisa, isebe lokuLungiselela. Kananjalo sidlulile kwi-ISO9001: Inkqubo yolawulo lomgangatho ye-2008 yamkelwe.
Iimveliso zethu zibandakanya iintlobo zee-electrode ze-welding ezinophawu lwe "Yuanqiao", "i-Changshan", enjenge-carbon yentsimbi ephantsi, i-Iow alIoy intsimbi, i-steels enganyangekiyo, iqondo lobushushu eliphantsi, i-stainless steel, i-iron yentsimbi, i-electrode e-welding eqinileyo. Zonke iintlobo zokucocwa okucociweyo kunye neendidi ezahlukeneyo zentsimbi eshushu Iimveliso zethu zinokusebenza ngokugqwesileyo, umgangatho ozinzileyo, ukubumba okuhle, ukuhambisa kakuhle, ukubanakho ukumelana nomhlwa, iStomata kunye nokuqhekeka, okuhle kunye nokuzinzileyo okugcinwe kwimishini yentsimbi.Iimveliso zethu zinokusebenza okuhle, umgangatho ozinzileyo, ukubumba okuhle, ukubumba okuhle ukususwa, ukubanakho kokumelana ne-rust, iStomata kunye nokuqhekeka, ukusebenza okuhle kunye nokuzinzileyo kokusebenza kwentsimbi.
Iimveliso zisetyenziswa ngokubanzi kwimimandla eyahlukeneyo yoqoqosho lwesizwe, ezinje ngoomatshini, isinyithi, ishishini leekhemikhali zepetroli, ibhoyila, inqanawa yoxinzelelo, iinqanawa, izakhiwo, iibhlorho, njalo njalo, Iimveliso zithengiswa kulo lonke ilizwe, kwaye Ifunyenwe ngabasebenzisi abaninzi.
Iimveliso zethu ikhulu ekhulwini zithunyelwa kumazwe angaphandle kwaye uthengise worldwidely, ikakhulu US, iYurophu, Umzantsi Melika, Australia, Afrika, Middle East, mpuma Asia njl njl iimveliso zethu ukuhlangabezana abathengi Wamkelekile ngokufudumeleyo ngenxa Obusemagqabini ubunjani, preformance ebalaseleyo kunye nexabiso kukhuphiswano .
Phantsi komoya "Obusemagqabini ubunjani, ukunyaniseka, win-win intsebenziswano", sizimisele ukufikelela kuphuhliso oluqhelekileyo kunye nokudala ubuchule nabo bonke abathengi. Sijonge phambili ekufumaneni inzuzo yokutya kunye, ubudlelwane bexesha elide kunye noluzinzileyo nabathengi nabasasazi kwihlabathi liphela. Siyakholelwa ukuba sinokufikelela kwikamva eliqaqambileyo ngemizamo yethu kunye.